ကျနော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့တော်တော်များပါတယ်။ ဒီအထဲက အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့အတွေ့အကြုံများကိုပဲ ဦးစားပေးတင်ပြလိုပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ ၀ိဓူရ သခင်ချစ်မောင်လို့ လူသိများခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့သခင်ချစ်မောင်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ကို ခွင့်တောင်းတော့ အဆင်ပြေစွာပဲ တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို သူ့ပါတီက ဗဟိုအလုပ်အမှု့ဆောင်လူကြီးတချို့နဲ့ပါ တွေ့ဆုံပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ဘ၀ သူတို့အတွေ့အကြုံတွေက ကျနော်တို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေ အများကြီးပါခဲ့ပါတယ်။ သူပြောတာတွေထဲမှာ သဘောကျတာလေးက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ -လူမသိသေးတဲ့စကားတွေနဲ့ အကြောင်းရာလေးပါ။ (သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။) ဒါပေမယ့် လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
ကျနော်တို့အထဲက တစ်ယောက်က မေးခွန်းတခု မေးလိုက်ပါတယ်။ “ ဘဘ... စစ်အစိုးရရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ကြိုးကိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုသံများအပေါ် … ဘဘ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ….။”
သခင်ချစ်မောင်က ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ရင်း ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ ရှုဆေးဗူးလေးကို ကောက်ရှုတယ်….။ “ ဒါကတော့သားရယ် ..။ ဘဘ အတတ်တော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့…။ ဒါပေမယ့် ဥပမာပေးရရင်…. ချောင်းလေး တစ်ချောင်းရှိတယ်…။ ချောင်းရဲ့ ဒီဘက်မှာလည်း သမင်ခြေရာကို တွေ့နေရတယ် ။ချောင်းရဲ့တဘက်မှာလည်း ခြေရာကို တွေ့နေရရင် .. အဲဒါ ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ…။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မမြင်သည့်တိုင်အောင်.. သမင်ဟာ စမ်းချောင်းကို ခုန်ပြေးသွားတယ် ဆိုတာ ပြောနိုင်ပါတယ်..။ ဒီလိုပါပဲ ။”
“ ဘဘ ..အန်တီနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင် .. ဘဘ သဘောထားဘယ်လိုရှိပါသလဲ…။ နောက်ပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းစဉ် အပေါ်မှာ... ဘဘ ဘယ်လောက် ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီနိုင်ပါသလဲ ။” ဆိုတော့......... “ ဘဘ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်…။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်း ဘဘ အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်..။ ဘဘ အသက်နဲ့ ခန္ဓာရှိနေသရွေ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပါ့မယ်။ ” ကျနော်တို့ရင်ထဲမှာ ပီတိတွေကိုယ်စီနဲ့…။
ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ စကားလဲ ဗျာ။ (လူထုဟာ ကိုယ့်နောက်က မပါလို့..နောက်က မလိုက်လို့ ဆို ပြီး ဒေါသပြင်းထန်နေသူများ ...မှတ်သားသင့်တဲ့ အဆိုအမိန့်တခုပါ။) တခါတုန်းက ကျနော် ဖတ်ကြည့်ဖူးတဲ့ (Our daily bread)ဆိုတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးစာအုပ်ထဲက အမေရိကန် သမတဟောင်း ဂျော့ဝါရှင်တန် ပြောသွားတဲ့စာသားလေးကိုလည်း ပြန်ပြောင်းသတိရမိတယ်……။
ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေ အကုန်လုံး သခင်ချစ်မောင်ကို ၀ိုင်းကန်တော့ကြပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ အန်တီစုဟာ သခင်ချစ်မောင် ရှိရာ အိမ်ကို သွားရောက်ပြီး ဂါရ၀ပြူ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဖြစ်စဉ်ကို ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး သခင်ချစ်မောင်တို့ အဖွဲ့ ဖြန့်ခဲ့တာ အဲဒီကာလက တော်တော်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာ အစဉ်လာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဂါရ၀ပြုဖို့ အစီအစဉ်တွေကို စတင်ရင်းနဲ့ဆက်လက် အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂါရ၀ပြုခြင်းရဲ့နောက်မှာ ညီညွတ်ခြင်း၊သင့်မြတ်ခြင်း၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်များလည်း ပါ ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ မရအောင် မုန်းတီးခြင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကို ပြေလည်ဖို့  ဆိုတာ ဒီနည်းလမ်းက လျော်ကန် အသင့်မြတ်ဆုံးပဲ..လို့ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ထဲက ကျောင်းသားတွေဟာ တက္ကသိုလ်များ ဓမ္မာရုံကို ဂါရ၀ပြူပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ တော်တော်လေး အကြံအိုက်သွားကြတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်နေခဲ့ရာက --- ကျနော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က အကြံပြုလာပါတယ် --။ ” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံထဲ လုပ်ခွင့်ရရင် မကောင်းဘူးလား..”တဲ့ ။”ကြိုးစားကြည့်ကြရအောင်..”တဲ့ ။
ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာ အလင်းစလေး တစ်ချက် လင်းလက်သွားတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အန်တီ့ကို တင်ပြကြည့်မယ်ဆိုပြီး.. တနေ့မှာတော့ အန်တီ့ကို ပြောပြကြတယ်---။ အန်တီက ချက်ချင်းပဲ သဘောပေါက်သွားသလား မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းတော့ မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘူး။ ”သူတို့ လူကြီးတွေ ဆွေးနွေးလိုက်ဦးမယ် ” ဆိုလို့ ကျနော်တို့ကို နောက်ထပ် ၃ ရက်လောက် အစောင့်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့က အန်တီ့ကို တင်ပြခဲ့တာ ..”အန်တီကသာ ခြံထဲမှာ လုပ်ခွင့်ပေးပါ။ ကျန်တဲ့ကုန်ကျစရိတ် ကျနော်တို့ခံပါ့မယ်..” လို့ဆိုတော့ အန်တီက ကျနော်တို့ကို ခပ်ထေ့ထေ့လေး ပြုံးကြည့်တယ်။ (အဲဒီအပြုံးဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှန်း နောက်မှသိလိုက်ရပါတယ်။)
နောက် ၃ ရက်လောက်အကြာမှာတော့ အန်တီက ကျနော်တို့ကို သူ့ခြံဝင်းအတွင်းမှာ အခမ်းနားလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြူခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ တော်တော်ပျော်သွားကြတယ်---။ အန်တီကကျနော်တို့ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးရင်း လှမ်းမေးလိုက်တယ်--။ ”အဆောက်ဦ ဆောက်ရင် ပိုက်ဆံက တော်တော်ကုန်မှာ ---။ သားတို့ ဘယ်လို စီစဉ်ထားသလဲ..” တဲ့---။ ကျနော်တို့အားလုံး ရုတ်ကနဲ ငြိမ်သွားပြီး.. တစ်ယောက်နဲ့တယောက် ကြည့်နေမိတယ်။
“ အန်တီ သဘောပေါက်ပြီးသားပါ..။ သားတို့ကျောင်းသားတွေ ဘယ်ကလာ ၀င်ငွေရှိမှာလဲ။ အခု အဆောက်အဦက ဆောက်မယ်ဆို ပိုက်ဆံက တော်တော်ကုန်ကျမှာဆိုတော့ အန်တီတို့ပဲ အကုန်ကျခံပါမယ်။” ကျနော်တို့အရှက်ပြေ ရိုးတိုးရွတ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အခုမှ သဘောပေါက်မိလိုက်တာက ဟိုတနေ့က အန်တီ ကျနော်တို့ကို ခတ်ထေ့ထေ့လေး ပြုံးကြည့်တာ ဒါ့ကြောင့်ကိုး။ ကျနော်တို့အကြောင်းကို အန်တီက ရှေ့ကြို တွေးထားပြီးသား။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့က လုပ်ချင်ဇောကြောင့်သာ အာမ ဘန္တေခံပြီး ပြောခဲ့ကြတာ။ လက်တွေ့မှာ ဒီ ကုန်ကျငွေ ရှာဖို့ ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။
နောက် တယောက်က မေးခွန်းတခု ထမေးလာပါတယ်---။ ” ဒါဆို ဦးနေ၀င်းကိစ္စကိုရော ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ ” ဆိုတော့.. ဒီမေးခွန်းကို ကျနော်တို့ ရင်တုန်မိတာ အမှန်ပါ..။ ကျနော်တို့ အဆုံးဖြတ် မပေးရဲပါဘူး..။ ဒီအချိန်မှာပဲ ဘဘ ဦးတင်ဦးက ထပြောလာပါတယ်…။
အန်တီကတော့ လူကြီးတွေရဲ့အကြံပြုချက်များကို ခပ်မဆိတ်လေးပဲ နားထောင်နေရှာတယ်။ ဘဘ ဦးတင်ဦးက ပဲ ဆက်လက်ပြီး………
ကျနော်က ဘဘ ဦးတင်ဦး ပြောအပြီးမှာ မေးခွန်းတခု မေးမိတယ်.....။ “ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မူအရ အားလုံးကို ကမ်းလှမ်းပါမယ်…။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက တစည ပါတီ ရယ် ...ဦးနေ၀င်းရယ် .....နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရယ်.....ကို ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းရမယ်ဆိုတာကို ...ကျန်တဲ့ အင်အားစုတွေက ၀ိုင်းဝန်းပြစ်တင်ကြရင် ......ကျနော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲ....။“ ဆိုတော့ ဦးကြည်မောင်က စကားလုံးဝ မပြောဘဲ နားထောင်နေရာကနေ ၀င်ထောက်ပေးလာတယ်….။ “ မူအရ လုပ်တဲ့ကိစ္စပဲ..။ အားလုံးနားလည်လာမှာပါ ။”
အားလုံးစက္ကန့်ပိုင်းမျှ ငြိမ်သက်သွားကြတယ်။ အတွေးကိုယ်စီနဲ့.....။ ထိုင်နေရာက ညောင်းလို့ ဟန်ချက်ပြောင်းထိုင်တဲ့ အသံမှတပါး.... (တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်နေတဲ့ ကင်မရာခလုတ်အသံလေးတွေက အခန်းတွင်းမှာ လူးလာပြေးနေကြတာက လွဲလို့…) တိတ်ဆိတ်သွားနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ…….အန်တီက အေးအေးဆေးဆေး ၀င်ပြောပါတယ်။
တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရတင်ဦး ၊ နောက်တစ်ယောက်က စစ်တိုင်းမှုးတာဝန်ကိုယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးကြည်မောင် ………။
အန်တီဟာ သူဖတ်လိုက်တဲ့ စာရွက်လေးကို ကိုင်ထားတဲ့လက်ကို ဘေးကို ချလိုက်ရင်း… ပရိသတ်ကို ပြုံးကြည့်လိုက်တယ်…..။ ညာဘက်လက်က မိုက်ကရိုဖုန်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်ထားရင်း…. “ ကျမဟာ.. သာမန်လူသားပါ..။ ကြောက်စရာနဲ့တွေ့ရင်… ကြောက်တတ်တာပေါ့…..။" (လက်ခုပ်သံများ) "........ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တဲ့အခါ တခါတလေ.. ကြောက်ကြောက်နဲ့လုပ်ရတဲ့ အခါလည်းရှိပါတယ်…။ကြောက်နေတယ်ဆိုတာ တခါတလေ့ အကျင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်…..။ဒါပေမယ့် အမြဲတန်း ကြောက်နေရင် အကျင့်ပါသွားတတ်တယ်…..။" (လက်ခုပ်သံများ ) "…………သတ္တိအစစ်မှန်ဆိုတာ ကြောက်လျှက်နဲ့မှန်တာကို လုပ်ရဲတာပဲ ” ပရိသတ်ကြီးဟာ ငြိမ်သက်စွာနဲ့အန်တီစုရဲ့ စကားလုံးတွေကြားမှာ နစ်မျောသွားတယ်..။ တခါတရံ ကုက္ကိုင်းလမ်းမကို ဖြတ်မောင်းလာတဲ့ကားတွေရဲ့ ဟွန်းသံတွေ ထွက်ထွက်လာတာကတော့ .. စိတ်အာရုံကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစေခဲ့တာအမှန်ပါ..။ သို့သော်လည်း သူတို့လည်း သူတို့ခရီးကို သူတို့သွားကြတာဆိုတော့ … နားလည်ပေးလိုက်ကြပြန်ပါတယ်….။
“ ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ ရှိရင် မှန်တာလုပ်သူတွေ အများကြီး အချုပ်အနှောင်ခံရတယ်…။ အများကြီး ဒုက္ခအပေးခံရတယ်….။ ဒါပေမယ့်လည်း မှန်တာမို့လို့ဆိုပြီး.. လုပ်ရဲတဲ့သတ္တိ မွေးဖို့ လိုတယ်…….။” (လက်ခုပ်သံများ) လက်ခုပ်သံတွေတောင် မဆုံးခင်မှာ ကားတစ်စီးက ဖြတ်မောင်းလာပြီး ဟွန်းသံကို မနားတမ်း ပေးတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေက သိပ်ညှပ်နေတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ .....အန်တီစုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်နားလောက်ရောက်တော့ ကားကို ဖြေးဖြေးလေးမောင်းလာပြီး ဟွန်းသံကို လုံးလုံးမရပ်ဘူး၊
အန်တီစုလည်း စကားဆက်ပြောလို့ မရတော့ဘူး။နားထောင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက ပွစိပွစိဖြစ်ကုန်တော့မှ ကားကိုမောင်းပြေးတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ အလားတူ ဟွန်းသံရှည်ဆွဲလာတဲ့ ကားတစ်စီး၊ နောက်ထပ် တစ်စီး….. နောက်ထပ်…….နောက်ထပ်…….။ အားလုံးအတွက် စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စေခဲ့တာတော့အမှန်ပါ..။ဒါပေမယ့် အန်တီစု အပါအ၀င် လူထုကြီးက စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သည်းခံရှာပါတယ်။ အဲဒီလို အဖြစ်ပျက်တွေက ဟောပြောပွဲကာလ အချိန်တွေ မှာ နေ့စဉ်နဲ့ ဆိုသလို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။
အမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ်.. ။ "စိတ်နဲ့တန်သော ဘ၀...." တဲ့။
ဒီလိုယုတ်မာမှု့တွေရှိသလို အင်မတန်မှ မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်များကိုလည်း ဟောပြောပွဲ အပြီးမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဟောပြောပွဲပြီးလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေကို လိုက်လံရှင်းလင်းပေးတဲ့ NLD ပါတီဝင်များအပါဝင် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ပါ။ သူတို့ကိုဘယ်သူကမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ကိုယ် ကူညီကြတာ ၊ ဘာအကျိုးစီးပွားမှ မမျှော်လင့်ဘူး ။ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် လာတယ်၊ သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ ကူညီကြတယ်………။ ဘယ်လောက်ချစ်စရာ…လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်မှု့တွေလည်းဆိုတာ ….. စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ.....။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, October 30, 2010
ကဲကြည့်လိုက်ကြပါအုံး..မြန်မာပြည်တွင်းမှာနော် ..မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဆိုတာ ပြောမှယုံရမှာပါလား..
အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့က လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာ စတိုးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်သစ် ဒီရေတိုး ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီး "အပိုင်း ၁" Promotion ပွဲ ဗီဒီယို ပါ။
နအဖ သန်းရွှေ့နှင့် လက်ပါးစေများအတွက် ထို့ အပြင် လူပုံအလည်မှာ ပုဆိုးလှန်ပြရဲတဲ့ အောင်သိန်းလင်းအတွက် အံ့မခန်းပါဘဲ။
မြန်မာပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာတောင်အခုလိုဖော်ပြသောမုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက်အစားအစာနှင့်သောက်သုံးရေအဓိကလိုအပ်နေ ဆိုတာကဲ့ဘယ်သူမှာတာဝန်အရှိဆုံးလဲ
အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်း ဂီရိကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူ၊ စစ်တွေ၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ မာန်အောင်၊ အမ်း၊ ပေါက်တောမြို့နယ်များတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများခဲ့ကာ မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ မကွေး၊ မန္တလေးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်လည်း အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် နေအိမ်အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ ရေဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် အဓိက လိုအပ်လျက်ရှိသော အစားအစာနှင့် သောက်ရေလိုအပ်ချက်ကို ကျောက်ဖြူမြို့နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများမှ စေတနာရှင်များ လှူဒါန်းမှုဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ ပေးလျက်ရှိကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
“ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာ သောက်ရေ လုံလောက်ပေမယ့် ဈေးအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ ဆန်ကလိုသလောက် ဝယ်မရတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ကျောက်ဖြူနဲ့ မြစ်ခြားတဲ့ မြေပုံမြို့နယ် ကျွန်းသာယာရွာမှာတော့ ရေတွင်းတွေထဲကို ရေငန်တွေ ဝင်သွားလို့ သောက်ရေ အခက်အခဲ အတော်ဖြစ်နေလို့ ကျောက်ဖြူကနေ ဆန်ရော၊ သောက်ရေရော ပို့ပေးနေရတယ်။ ရေလမ်းနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ မြေပုံမြို့နယ်ထဲက မြေပြန့်ကျတဲ့ သင်ပေါင်းချောင်းရွာ၊ ငပတုန်ရွာတွေကိုလည်း ဆန်နဲ့ သောက်ရေတွေ ပို့ပေးနေရတယ် ” ဟု ၄င်းကပြောသည်။ ကျွန်းသာယာရွာတွင် သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးရှိကာ ၃၀ ပျောက်ဆုံးလျက် ရှိကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းမှလည်း ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်ကာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးလျက်ရှိသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများကိုလည်း ရှင်းလင်းလျက် ရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ အထူးအစီစဉ် (ရုပ်သံ)
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား လယ်သမားတို့၏ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှု မှတ်တမ်းတစိတ်တဒေသ
ဗိုလ်ချုပ် နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုရှာပုံတော်
နောက်လိုက်များပေါက်အောင် ပြောဆိုနိုင်သော ခေါင်းဆောင် ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ မိမိဦးဆောင်ရသည့် အဖွဲ့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ရှေ့သွားရမည့် ပန်းတိုင်ကို ကြိုတင် ကြည့်ရှု မျှော်မှန်းရသည်။ ထိုသို့ မြင်နိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်သည်။သို့သော် သူ၏ အဖွဲ့သားများမှာ ခေါင်းဆောင်မြင် သလို မြင်ကောင်းမှ မြင်နိုင်မည်။ ထိုအခါတွင် ခေါင်းဆောင်သည် သူမြင်သည့် အရာကို အဖွဲ့သားများပါ မြင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ သွားရာ လမ်းခရီးကို အဖွဲ့သားများ လိုက်ပါ ချီတက် လိုလာအောင် ပြောဆိုရမည်။ ယင်းကို ပညာရပ် အလိုအားဖြင့် Leadership Communication ဟုခေါ်ကာ ခေါင်းဆောင်မှုတွင် အရေးကြီးသော အရည်အချင်း တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
အချို့ခေါင်းဆောင် များမှာ အမြင်ကျယ်ပြီး နောက်လိုက်များ မမြင်သည်ကို မြင်သည်။ သို့သော် နောက်လိုက်များအား သူ့လို မြင်လာအောင် ရှင်းမပြနိုင် သဖြင့် သူ့အား အဖွဲ့သားများက အထင်လွဲကာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှ ကျဆုံးရသည်။ သူခေါင်းဆောင်ရသည့် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းလည်း ခရီး မပေါက်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်များသည် ဉာဏ်ရည်မြင့်ရုံ၊ အမြင်ကျယ်ရုံဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ အဖွဲ့သားများ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ချပြနိုင်ရန် လိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် သူ့အား ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုထားသော လူထုနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အခက်အခဲဆုံး အချိန်များတွင်ပင် လူထုကြီးထံ သူပြောလိုသော အကြောင်းအရာကို ရောက်အောင် ပို့နိုင်သော သူဖြစ်သည်။
ဂျပန့်ခေတ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော်သည် အန္တရာယ် ပေးလာနိုင်သည်ဟု ဂျပန်တို့က မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့သည် ပေးခဲ့သော ကတိများကို အထပ်ထပ် ဖျက်ခဲ့ချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ကလည်း ဂျပန်တို့ သဘောကို သိလာခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့ ဇာတိပြကာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအား နှိပ်စက် လာသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့မှာ ဂျပန့်ဘက်သား အသွင်ဖြစ်နေသဖြင့် ပြည်သူများမှာ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဘီအိုင်အေ အတွင်းတွင်ပင် ခေါင်းဆောင်ငယ် အချို့က ဂျပန်အား တော်လှန်လိုသော စိတ်များ ဆူဝေနေရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့က ကန့်လန့်ခံ နေသောကြောင့် ‘ငပန့်ကို မဆော်ရရင် ငမိုးကို ဆော်ရလိမ့် မယ်ဟေ’့ (မောင်ထင် ဗမာ့အောင်ဆန်း) ဟူသော စကားများပင် ထွက်ရှိခဲ့သည် (ငမိုးမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နာမည်ပြောင် ဖြစ်သည်)။
မိမိနှင့်တကွ ဘီအိုင်အေ အတွက် အန္တရာယ်များ လှသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်သည် တွက်ဆကာ ‘ဂျပန်တို့ ပေးသော လွတ်လပ်ရေးသည် ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးသာ ဖြစ်ကြောင်း’ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်စစ်သေနာပတိ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်သည့် လွတ်လပ်ရေး ပထမနှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောဆိုခြင်းဖြင့် မိမိလည်း ဂျပန်တို့၏ စရိုက်ကိုသိသည်၊ မိမိသည် ဂျပန့်ဘက်သားမဟုတ်၊ ဂျပန်တို့အား အခြေအနေအရသာ ကြည့်နေရ သေးကြောင်း ပြည်သူလူထုနှင့် တကွ တပ်မတော်သားများ၊ အရာရှိများအား အသိပေးခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ပြည်သူများ အပါအဝင် တပ်မတော်သားများပါ ဗိုလ်ချုပ်တို့၏ အနေအထားနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
‘ကနေ့ လွတ်လပ်ရေးရလို့ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲနေ့၊ ဒီပြည်သူ့ အစည်းအဝေးကြီးမှာ ကျွန်တော်ဟာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူပြည်သား တစ်ဦးအဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ စကားတွေကို ပြည်သူအများရဲ့ အကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီး ပြောပြလိုပါတယ်။ ယခု ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရတာ တစ်နှစ်စေ့လာပြီ။ ဒီအတောအတွင်းမှာ ကျုပ်တို့ ဘာတွေရကြသလဲ။ အမှန်ပြောရရင်တော့ ကျုပ်တို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးအရသာ ဆိုတာ မခံစားရသေးဘူး။ ခံစားရတဲ့ လူတွေဟာလည်း လူနည်းစု သာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလူနည်းစုတွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ပါ အပါအဝင် ကျုပ်တို့အထက်က အစိုးရ အရာရှိကြီးတွေ၊ ‘ဒီလူတွေကို ကပ်မြှောင်ပြီး စားနေတဲ့လူတွေ၊ အမြတ်အစွန်း ကြီးကြီးယူပြီး လူတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ရင်းနှီးပြီး စီးပွားရှာနေကြတဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေ။ အဲဒါတွေ လောက်ပဲ။
အဲဒီတော့ တိုင်းသူပြည်သား တွေအဖို့မှာ လွတ်လပ်ရေးရ ပေမယ့် ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေမှာပဲ။ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ ဘယ်မှာလဲလို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ စိတ်ထဲမှာ မေးကြမြန်း ကြလိမ့်မယ်။ အမှန်ကတော့ အခုလွတ်လပ်ရေးဟာ အများသိကြတဲ့ အတိုင်း စာပေါ်လွတ်လပ်ရေးပဲ ရှိသေးတယ်။ လက်တွေ့သဘော အထည်နှင့် ကိုယ်နှင့်၊ ဒြပ်နှင့် အကောင်အထည်နှင့် မမြင်ရ၊ မတွေ့ရ မခံစားရသေးဘူး။ ကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်ပြီး စခန်းသွားနိုင်ဦးမှ လွတ်လပ်ရေး အကောင်အထည်ကို မြင်ရလိမ့်မယ်။ အခုမမြင်ရသေးဘူး။ (၁၀၄။ အောင်သန်း၏အောင်ဆန်း)
ဖက်ဆစ်တို့အား တော်လှန်ရန် စစ်မြေပြင်သို့မထွက်မီ ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က ဖက်ဆစ်တို့ ရှေ့တွင်ပင် ဗမာ့တပ်မတော်သား များအား ပြောကြားခဲ့သည့် စစ်ထွက်မိန့်ခွန်းမှာ ရဲဘော်တို့အား၊ ထိုမှတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သူတို့အား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြောင်မြောက်စွာ ဆက်သွယ် ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့နှင့် ရင်းနှီးပြီး မိန့်ခွန်းဖြစ်သော်လည်း ခေါင်းဆောင်က ပြောလိုသည့်စကားအား နောက်လိုက်တို့ ရင်တွင်းသို့ရောက်အောင် သွယ်ဝိုက်ကာ တိုက်ရိုက် ပြောကြားနိုင်ခဲ့ပုံကို မြင်သာ စေလိုသဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
‘ရဲဘော်တို့... အကျယ်ချဲ့ပြီး ရှည်ရှည်မပြောချင်ဘူး။ အခုစစ်မြေပြင်ကို ထွက်ရမယ်၊ ဆင်းရဲမယ်၊ ငတ်မယ်၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ ဗမာပီပီ ဗမာ့သွေးကို ပြကြ။ အထက်ဗိုလ်များရဲ့ အမိန့်ကို နာခံကြ၊ အထက်ဗိုလ်များကလည်း သာတူညီမျှ ရဲဘော် စိတ်ထားကြ။ ရဲဘော်တို့ကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ရဲဘော်တို့နဲ့ ချီတက်မယ်။ ဗမာ့ရန်သူကို ချေမှုန်းကြ၊ အနီးကပ်ဆုံး ရန်သူကို ရှာပြီးတိုက်ကြ။ ဒါပဲ။’
အထူးသဖြင့် ‘အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုရှာပြီးတိုက်ကြ’ ဆိုသည်မှာ ဖက်ဆစ်များကို အလိမ္မာဖြင့် ရည်ညွှန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အလွန်ထိရောက် လှကြောင်း တွေ့ရသည်။ တပ်မတော်သား အများစုက ဖက်ဆစ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ပြောမှန်း သိကြသည်။ နားထောင်နေကြသည့် ဂျပန်တို့ကမူ အင်္ဂလိပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ထင်ကြသည့်အတွက် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး အပြီး အင်္ဂလိပ်တို့ ပြန်အဝင်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် နိုင်ငံရေး လွန်ဆွဲပွဲများ အကြိတ်အနယ် ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များ (အင်္ဂလိပ်က တင်သူရော မတင်သူပါ) မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များထဲမှ ပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်တို့သည် အင်္ဂလိပ်တို့အား လိုက်လျောလွန်းသည်ဟု ဝေဖန်မှုများ ပေါ်ထွက် လာသောကြောင့် ပြည်သူတို့ နားလည်မှု လွဲမသွားစေရန် များစွာ အရေးကြီးသည်။ “အောင်ဆန်းသည် နိုင်ငံအား ရောင်းစားခဲ့ပြီ” ဟု သွားပုပ်လေလွင့် ပြောဆိုမှုများပင် အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်ချုပ်ဆို အပြီးတွင် ထွက်ပေါ်ခဲ့ သောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပြည်သူတို့နားလည်စေရန် ရှင်းပြခဲ့ရသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလဆန်းတွင် အင်္ဂလန်ပြည်သို့ သွားကာ လွတ်လပ်ရေးကို အရေးဆိုစဉ် ကလည်း မြန်မာလူထုကြီးအား “ငါတို့ ဗမာပြည်မှာ မရှိတုန်းကို တိုင်းသူပြည်သား အားလုံးဟာ အရေးရှိက အဆင်သင် ဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပြီး ကျုပ်တို့ အပြန်ကို ငံ့လင့်ကြပါ” ဟုလည်းကောင်း၊ “အကောင်းဆုံးကို မျှော်မှန်းပြီးတော့ အဆိုးဆုံး အတွက် အဆင်သင့်ရှိပါစေ” ဟုလည်းကောင်း လွတ်လပ်ရေး မရပါက တိုက်ပွဲဝင်ကြမည်ဟု ပြည်သူတို့ကို အကြောင်းကြားခဲ့ ပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ပြည်သူလူထုအား မိန့်ခွန်းပေါင်း များစွာ ပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်သူအား သူ၏ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် နိုင်ငံလျှောက် ရမည့်ပန်းတိုင်နှင့် နည်းလမ်းကို နားလည်အောင် အကောင်းဆုံး ရှင်းပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အရှိန်အဝါကြီးခဲ့ပြီး တပ်မတော် တွင်းတွင်ပါ ဩဇာလွှမ်းခဲ့သည့် ကွန်မြူနစ် ပါတီအား ဖဆပလတွင်းမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ရာတွင်၊ တိုင်းရင်းသား ချစ်ကြည်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး စည်းလုံးရန် လိုအပ်ချိန်တွင် စသည့် အရေးကြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်တိုင်း ပြည်သူလူထု နားလည်အောင် ဗိုလ်ချုပ်သည် မိန့်ခွန်းများ ထိထိရောက်ရောက် ဟောကြားခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ပြည်သူပြည်သားများနှင့် ဆက်သွယ် ပြောကြားရေး အပေါ် ဗိုလ်ချုပ်၏ သဘောထားကို
‘ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူဟာ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ကိစ္စကို တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ပြောရဲရမယ်၊ ရှင်းပြနိုင်ရမယ်’ (၂၄၂၊ အောင်သန်း၏အောင်ဆန်း) ဟူသော စကားတွင် မြင်သာသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းများ အပြောဆုံးကာလမှာ အင်္ဂလိပ်ပြန်အဝင်နှင့် လွတ်လပ်ရေးမရမီ ကာလတွင် ဖြစ်သည်။ ထိုကာလ အတွင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်သည် လက်မလည်အောင် မိန့်ခွန်းများ ပြောခဲ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်ကို ဆန့်ကျင်ရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးဟူသော ပန်းတိုင်ကို မမှိတ်မသုန် မျက်ခြည်မပြတ်ရေး၊ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး စသော အရေးပေါင်း များစွာကို ပြည်သူတို့နှင့်အတူ လက်တွဲ ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဆက်သွယ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်၊ မိမိအသံကို ပြည်သူတို့ ကြားအောင် အမြဲကြိုးပမ်းခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် Leadership Communication အရေးကြီးပုံကို သိလည်းသိ၊ ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, October 29, 2010
မတရားတဲ့နအဖရွေးကောက်ပွဲပြီးမှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်မယ်ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေသူရဲဘောကြောင်တဲ့ လုပ်ရပ်
နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဖြစ်မနေဆန္ဒမဲပေးခဲ့ရလျှင်ခြင်္သေ့ကိုရှောင်ပြီး မဲပြားကို နှစ်ခါသာခြစ် စစ်အာဏာရှင် မပါတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကိုရောက်ပြီးဗျို့
ခမရ ၄၃၅ နဲ့ ၄၃၆ က တပ်ရင်းမိသားစုနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၀၀ လောက်ဟာ တပ်ရင်းမှူးရုံးမှာတောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြ
ဒီကနေ့မနက် ၆ နာရီလောက်မှာ တောင်ဥက္ကလာအခြေစိုက် ခမရ ၄၃၅ နဲ့ ၄၃၆ က တပ်ရင်းမိသားစုနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၀၀ လောက်ဟာ တပ်ရင်းမှူးရုံးကိုသွားပြီး သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး ပြဿနာကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့ အဲဒီ တောင်းဆိုပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
တပ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ရဲမေတွေနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက မနက် ၆ နာရီ တန်းစီတဲ့အချိန်လောက်မှာ တပ်ရင်းရုံးကိုလာပြီး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာမှာစားနပ်ရိက္ခာ အလုံအလောက်ချပေးဖို့ တောင်းဆိုကြတဲ့အကြောင်း တပ်ရင်းမှူးကတော့ စဉ်းစားပေးမယ်လို့ ပြောတဲ့အကြောင်း ခမရ ၄၃၅ က တပ်သားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာမှာပါဝင်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးကလည်း အခုဆိုရင် သူတို့ဟာ ကျူရှင်တက်ချင်ပေမယ့် ဖခင်ရဲ့လစာနဲ့ မလုံလောက်လို့ ကျူရှင်မတက်ရတဲ့အကြောင်း ပြောတဲ့အကြောင်း ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးဘူး ဆိုရင် ဆက်လက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း အဲဒီကျောင်းသူကပဲ ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ တပ်ရင်းမိသားစုတွေ အခုလိုစားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းလာနေတဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ အထက်ကို အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမယ့် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်လို့ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးကိုပါ ထိခိုက်လာပြီဖြစ်လို့ အခုလို တပ်ရင်းမိသားစုတွေ တွင်မက တပ်တွင်း ကျောင်းသားတွေပါ စုပေါင်းပြီး တောင်းဆိုဆန္ဒပြလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
FDB Statement on Ka Lay Declaration
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကြီးခေါ်ယူကျင်းပရန်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာမြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ဖောင်ဒေးရှင်း(IFBNC) မှ ကြိုဆိုထောက်ခံထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Statement of IFBNC for KaLay Declaration
ကိုကျော်သူ ရဲ့ အစိမ်းရောင် လူသား
ကျွန်တော် ၏ မွေးနေ့ ၂. ၁၁. ၅၉ နေ့အကြို...ရင်တွင်းရှိအမှိုက်များကိုရှင်းထုတ်ခြင်း...ဆောင်းပါးမဟုတ်၊ကဗျာ
မဟုတ်..။ နှလုံးသားထဲ မွေးဖွား ပေါ်ပေါက်လာမှု တို့ ကို ချပြ ခြင်းသာ ဖြစ်တော့သည်။
အကြောင်း … အကြောင်းပေါင်းစုံကို အဟောင်းက အသစ်ဖြစ်အောင် စစ်ရာဇ၀င် သမိုင်းစစ်ကို အမှန်တကယ်အားကျ၊ နှလုံးသားထဲ ထကြွလာအောင် ပြောပြကြတဲ့ မိဘ၊ ဘိုးဘွားများနှင့် ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး။
သြော် . . . အဲဒီအချိန်မှာ လူလတ်အတွေး တွေးကြည့် “အစိမ်းရောင်ဆိုတာ ဒါမျိုးကြီးလည်း ဖန်တီးသားပဲ” လို့။ ဒီလိုနဲ့ … န၀တခေတ်ထဲ လူဖြစ်လို့လာ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, October 28, 2010
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Thursday, October 28, 2010
Labels: မျှဝေခြင်း, သတင်းဓာတ်ပုံ, သတင်းမှတ်တမ်း
ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားများဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့ နအဖက(NCGUB)အလံကို တရားဝင်ထုတ်ပြီးဘာကြောင့်ယူသုံးထားပါသလဲ
မကြာမီ ကျင်းပတော့မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြားစေရန် ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်နှောင့်နှေး ရပ်တန့်သွားစေရန် မလျော်ကန်သည့် အကြံဆိုးများဖြင့် အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး ကြံစည်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းကူညီမှုဖြင့် လက်ဦးမှုရယူ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်သူလူထု၏ သတင်းပေးချက်အရ သင်္ကာမကင်းဖွယ်ဖြစ်သူ လှည်းကူးမြို့နယ်နေ အောင်မျိုးသူ ၂၉ နှစ်အား ပဲခူးဒီဂရီကော်လိပ်ရှေ့အများသုံး တယ်လီဖုန်းရုံအနီး၌ တွေ့ရှိသဖြင့် ခေါ်ယူစိ စစ်မေးမြန်းခဲ့သည်။ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်အရ ၄င်းသည် ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ် ရပ်ကွက်ကြီး(၈) ရွှေနှလုံးတော်ဘုရား ကျောင်းဝင်းအနီး၌ မြေမြှုပ်သိုဝှက်ထားသည့် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး ပစ္စည်းများကို လာရောက်ယူဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းကို စေခိုင်းသူမှာ မင်းမင်းထွန်းဆိုသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ် သိရှိရသဖြင့် မင်းမင်းထွန်း (ခ)လပြည့် (ခ)ခင်ဇော်အား အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အကူအညီဖြင့် ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်(တောင်)ရပ်ကွက်ရှိ ဟဒယလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ ထပ်မံဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
၄င်းတို့အား ဆက်လက်စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ရာမှ ပဲခူးမြို့ဥဿာမြို့သစ်ရပ်ကွက် ကြီး(၈)ရွှေနှလုံးတော် ဘုရားကျောင်းအတွင်း နေထိုင်ကြပြီး ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို လက်ခံသိုဝှက် သိမ်းဆည်းထားသည့် ၀င်းမြင့်၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံ၌ ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း တက်ရောက်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပဲခူးမြို့ ရပ်ကွက်ကြီး(၈) အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီရုံးကို မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲခဲ့သူ ထွန်းဦးနှင့် ဆက်စပ်တရားခံဖြစ်သော ကံမင်းသာ(ခ) ဆရာကံ(ခ) ဖရန်စစ်တို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
၄င်းတို့အား စိစစ်ဖော်ထုတ်ချက်များအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ်ခန့်တွင် ပဲခူးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ဘုရားကျောင်းအနီး ဘုရားသုံးဆူ သချိင်္ိုင်းအစပ်၌ ပလတ်စတစ်ပုံး အတွင်းထည့်၍ မြေမြှုပ် သိုဝှက်ထားသော TNT ယမ်းတုံး (၂၀၀)ဂရမ် ၅ တုံး၊ လျှပ်စစ်ဒီတိုနေတာ ၁၀ ချောင်း၊ ယမ်းကြိုး ၈ ပေ၊ ၉၁ လက်ပစ်ဗုံး (ဖြူးစ်ပါ) ၁ လုံး၊ အဝေးထိန်းခလုတ် ၁ ခု၊ ချိန်ကိုက်နာရီ ၁ လုံး၊ ဓာတ်ခဲထည့်အိမ် ၃ ခု၊ လမ်းလျှောက် စကားပြောစက် ၁ လုံး၊ ရှော့တိုက်မီးသီး ၁ လုံးတို့ကို ဆက်လက် သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး ပစ္စည်းများကို တစ်ဖက်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ပေးပို့အပ်နှံ စေခိုင်းသူ ABSDF အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ ဖောက်ခွဲရေးသမား အောင်ဝင်းနိုင် (ခ)စတီဗင် (ခ)ထွန်းထွန်း ဆိုသူဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး ပစ္စည်းများကို KNU သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ထံမှတစ်ဆင့် ပဲခူးမြို့ဥဿာမြို့သစ် ရပ်ကွက်ကြီး(၈) ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်းအတွင်း နေထိုင်သော ၀င်းမြင့်ထံ ဆက်သွယ် ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်နှင့် ၁၀ မိုင်ကုန်းတ၀ိုက်၌ လတ်တစ်လော ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန် သတ်မှတ်လျာထားခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လူအများအေးချမ်းစွာ စုစည်းသွားလာတတ်သည့် စည်ကားရာ နေရာများ၌ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိရသည်ဟု ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့သတင်းဌာန မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, October 27, 2010
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၂၃ မိနစ် ၂ စက္ကန့် အချိန်တွင် မန္တလေးမြေငလျင်စခန်းမှ အနောက်တောင်ဘက် ၁၀ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းတစ်နေရာကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်(ခ်ျ)တာစကေး ၃ ဒသမ ၆ အဆင့်ရှိ အင်အားအနည်းငယ်ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်သွားသည်ဟု တိုင်းထွာရရှိကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မဲမပေးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိသော နှစ် ၂၀ မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။
၂၉ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကြားနာမဲ့ အထူးအယူခံကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့ ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်း၊ ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့ ၃ ဦး ဒီကနေ့ နေ့လည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပြီး အဲဒီတွေ့ဆုံချိန်မှာ ပြောလိုက်တာပါ။
တဆက်တည်းမှာပဲ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်တယ်လို့ ဒီကနေ့ တရားဝင် ကြေညာလိုက်တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဘောတူတယ်လို့ ရှေ့နေတွေကတဆင့် ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ဇနီးဒေါ်နီနီခင်အား အနုကြမ်းစီးသူကို မိပြီိ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်၏ဇနီး အသက်(၇၅)နှစ်အရွယ်ရှိ အဘွားအား အုတ်ခဲဖြင့်ထုရိုက်ခဲ့ကာ နေအိမ် အတွင်းအနုကြမ်း ၀င်စီးခဲ့သော တရားခံအား အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ''တရားခံက အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ သူ့အသိမိတ်ဆွေတွေဆီမှာ ရောက်ရှိ တိမ်းရှောင်နေတယ်လို့ သတင်းရတာနဲ့ သွား ရောက်စောင့်ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက် တိုဘာ၁၁ရက်မှာ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်''ဟု သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါတရားခံ၏အမည်မှာ ဘို မောင်(ခေါ်)ကျော်ဇေယျဖြစ်ကာ အသက် (၂၈)နှစ်ခန့်ရှိကြောင်း၊ ယင်း၏အပြစ်များ အား တရားသူကြီးရှေ့မှောက်တွင် ယင်းကိုယ် တိုင်ဝန်ခံချက်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း အား ပနံပါတ်(ပ/ ၁၃၉၃)ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေး ယူထားကြောင်း သိရသည်။ဘိုမောင်၏ဇာတိမှာ တစ်နယ် တစ်ကျေးမှဖြစ်သော်လည်း သန်လျင်တွင်ကြီး ပြင်းခဲ့သူဖြစ်ကာ မွေးချင်းခြောက်ဦးရှိကြောင်း၊ သန်လျင်တွင် စားပွဲထိုး စသည့်ကြုံရာအလုပ် များလုပ်ကာ အသက်မွေးသောသူဖြစ်ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ၇ရက် တွင် တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ဇနီးဆရာမ ဒေါ်နီနီ ခင် နေအိမ်အတွင်း တစ်ဦးတည်းရှိနေစဉ် ဖုန်းပြင်သမားဟန်ဆောင်ကာ အိမ်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်၍ ဒေါ်နီနီခင်အား အုတ်ခဲဖြင့် ထုရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် အနုကြမ်းစီး ခံခဲ့ရသော အသက်(၇၅)နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာမ ဒေါ်နီနီခင်မှာ ၀ဲဘက်ဦးခေါင်း ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ များအား အချက်၂၀မှ၃၀ကြားလည်းကောင်း၊ ၀ဲဘက်မျက်ခုံးအထက်တွင် ၁၀ချက်ကျော် လည်းကောင်းချုပ်ခဲ့ရကာ ဦးခေါင်း၊ ပခုံး၊ လက် စသည့်နေရာများတွင်လည်း ညိုမည်း ဒဏ်ရာများရခဲ့ကြောင်း၊ ဦးခေါင်းခွံအနည်းငယ်အက်ကွဲသွားသဖြင့် ဦးနှောက်အတွင်း သွေးအနည်းငယ်ရောက်ရှိခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရသည်။ ''ခုတရားခံက အရင်ဖုန်းတွေ ပျက် လို့ ပြင်ရင်၊ လာပြင်တဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ပါပါ လာတတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သူက အိမ်ကို သုံးခေါက်လောက်ရောက်ဖူးနေတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် အိမ်မှာအဘွားတစ်ယောက်တည်း ဘယ်အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သူက သိနေ တယ်ထင်တယ်''ဟု ဒေါ်နီနီခင်၏သားဖြစ်သူ ဆရာဘုန်းတင့်ကျော်က ပြောသည်။
နှစ် ၆၀ ပျောက်ဆုံးမှုကို အဖြေရှာခြင်း(ဦးဝင်းတင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
နှစ် ၆၀ ခန့်ကြာ ပျောက်ဆုံးခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို ပြန်ရှာရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံတရပ် ခေါ်ယူကျင်းပရေးကို သဘောတူကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် - အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်က ယနေ့ ပြောဆိုသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရမည်ဟု nld-not-re-register3ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် - ဇက်အန်စီက စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့၌ ယခုလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော ၂၂ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား၌ ကြေညာစာတမ်းတစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အန်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများက သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သဖြင့် မဇ္ဈိမက ဦးဝင်းတင်ကို သဘောထား မေးမြန်းကြည့်စဉ် ထိုသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စိတ်တ္တဇ ဆေးရုံအားကိုးနဲ့ မိုးခါးရေသောက်ခြင်သူများ
ဆန်ကွဲဘန်းလေးရယ်အလယ်က မဲပြားလေးက ကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်နေတော့
၀င်းမော်ဦးက … ၀မ်းနည်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့
တို့… နင်တို့အတွက်.. အသက်ပေးသွားတာ တကယ်ပါ ဟယ်တဲ့။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့.. သံတိုင်လေးကိုမှီရင်း… တိုးတိုးလေးကပ်ပြောရှာတယ်
ကိုယ့်လူ------ ငတေမာတွေကို… သတိထားတဲ့။
ဆင်ဝင်အောက်က … ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်ရင်း………..
ဒီပဲရင်းမှာ “ ငါ့ကိုတကယ်သတ်တာ ” တကယ် ပါ သားရယ်……..
အိမ်ရှေ့မှာတော့ င်္ခြသေ့အလံနဲ့လူတွေ … မိုးခါးရေတိုက်ပြီး… မဲပြားလေးတွေကို
လာမဲ့.. သက္ကရာစ်…၂၀၅၀ မှာ တနေ့ကို လျှပ်စစ်မီး.. ၄နာရီပုံမှန်ပေးနိုင်ဘို့…
ကျွှန်းသစ်တွေ၊ကျောက်စိမ်းတွေ၊ရွှေမှော်တွေကို ပါးစပ်ထဲမှာဝါးလိုက်.. ထွေးထုတ်လိုက်နဲ့..
အိမ်ရှေ့ခန်းက ထရံမှာ… နေရှုးနဲ့အတူယှဉ်တွဲရပ်နေတဲ့ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက
ဆင်းလာတဲ့ပြီး… ကျွှန်တော့် နားရင်းကိုအုပ်လိုက်တယ်…….
စိတ္တဇ…ဆေးရုံအသစ်ကြီး နေပြည်တော်မှာ အကြီးကြီးဆောက်နေတာ.. မင်းမသိဘူးလား
အတော် “ အ ” တဲ့ကောင်… အဲဒါ မင်းတို့အတွက်… အကောင်ရဲ့တဲ့……
မိုးခါးရေခွက်လေးက .. ကျွှန်တော်လက်ထဲမှာ………
ဝေမျှ ပေးသော စစ်မုန်းသူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
(သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားများ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်)
မြန်မာကျောင်းသား ရဟန်းတော်များ နအဖ အလံသစ်အား မီးရှို့နေစဉ်
ပေးပို့ ပေးသော မေမေ့သား ရှင်ဝါ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Burmese Angels' News (ရုပ်သံ)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, October 26, 2010
Election campaigning (ရုပ်သံ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင်သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အားအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်းဆု ချီးမြှင့်
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် မနေ့ က စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ဇိုမီး အမျိုးသားကွန်ဂရက် တည်ထောင်ခြင်း ၂၂ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှာ NLD ပါတီ က ဗဟို ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်ကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆောင်ရွက်သူ သူရဲကောင်းအဖြစ် ဂုဏ်ပြုလိုက်တယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဒီခေတ်ဒီချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံဥပဒေလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုအတွက် ဘာမှ အကြောင်းထူးမှာ မဟုတ်ဖူး။ ဒါ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်မြဲဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာလည်းပဲ အဲဒီ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုဖို့ ဖြစ်နေတော့ အကြောင်းထူးမှာ မဟုတ်ဖူး။ တကယ် အကြောင်းထူးဖို့ လိုတာက အမျိုသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ အဲဒီမှာ အဓိက ကျွန်တော်တို့ အားကိုးအားထားရတဲ့ လူတွေက ဦးဝင်းတင်တို့၊ ဦးတင်ဦးတို့ ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ အဲဒီ အမြင်နဲ့ သူ့ကို ဒီဆုကို အပ်နှင်းတာပါ။,
Burma's 2010 Election; This is NOT Democracy
Burma's 2010 election to be held this November is political theater designed to legitimize the military regime that has violently held power in Burma since 1962. "This is NOT Democracy" examines the true reasons and historical context for the current election and why the regime's so-called "Roadmap to Democracy" is onlyasmoke screen to mask the regime's continued human rights abuses and refusal to relinquish leadership of the country to the pe...
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Tuesday, October 26, 2010
မုန်တိုင်းပြီးစ ကျောက်ဖြူမြို့ ရဲ့စိတ်မကောင်းစရာ မြင်ကွင်း ပုံရိပ်ဓာတ်ပုံများ.. (၂)
ကျောက်ဖြူမြို့သည်ကား ရခိုင်ပြည်ရှိ ရမ္မာဝတီခေါ် ရမ်းဗြဲကျွန်း၏ မြောက်ဘက်ဖျားရှိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးတွင် ရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ရှေးအခါက ရခိုင်ပြည်ကြီးတွင် ၀တီလေးရပ်အပါအ၀င် တိုင်းကြီး (၁၂) တိုင်းရှိခဲ့ဘူးပေသည်။ ထိုတိုင်းများထဲတွင် ရမ္မာဝတီခေါ် ရမ္မာပူရကျွန်းသည်လည်း တိုင်းတတိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
ဤ ရမ္မာပူရကျွန်းအား နောက်တနည်း အဆိုတရပ်မှာကား ကဿဖဘုရားသခင်လက်ထက်တော်အခါက တပါးသောနေ့တနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ရဟန္တာများနှင့် ကောင်းကင်စံခရီး ကြွတော်မူရာတွင် ရခိုင်ပြည်၏အလယ်ဗဟိုကျသော ပင်လယ်ထဲတွင် ၀မ်းဘဲငှက်သဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ ကျွန်းငယ်တစ်ခုပေါ်သို့ ဆင်းသက်ရပ်နားတော်မူပြီး၍ ကျွန်းငယ်ကားနောင်တွင် ၀မ်းဘဲကျွန်းဟုအမည်တွင်အံ့ဟူ၍ ဗျာဒိတ်တော် ထားခဲ့တော်မူသည်။ ယခုကာလကြာရှည်လာခြင်းကြောင့် ရမ်းဗြဲကျွန်းဟူ၍ ပြောင်းရွှေ့ခေးဆိုကြကြောင်းအဆိုရှိခဲ့လေသည်။
ထိုနောက်ကာလအလွန်ကြာမြင့်လာသောအခါတွင် ရခိုင်ပြည်အား မြန်မာမင်းတို့ သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။ ထိုမှတဖန် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၄-၂၆ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်မြန်မာတို့ ပထမအကြိမ်စစ်ပွဲကြီြးုဖစ်ပွားရာ ရခိုင်ပြည်အား အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းယူရရှိသွားလေသည်။ ထိုအခါ အင်္ဂလိပ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်အား လေးခရိုင်ပြုလုပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) စစ်တွေခရိုင် (၂) အမ်းခရိုင် (၃) ရမ်းဗြဲခရိုင် (၄) သံတွဲခရိုင်များပင် ဖြစ်ပေသည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၉ ခုနှစ်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ရခိုင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အဖြစ်ချထားပြီး တပ်မြို့သဖွယ်ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပေသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၃၇ ခုနှစ်တွင် အမ်းခရိုင်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလျှင် ကျောက်ဖြူခရိုင်အဖြစ် ပြောင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။ ထိုနောက်တဖန် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် ရမ်းဗြဲခရိုင်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အမ်းခရိုင်နှင့် ရမ်းဗြဲခရိုင်နှစ်ခုကို တခုတည်းအဖြစ်ပူးပေါင်း၍ ကျောက်ဖြူခရိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူမြို့ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ လှပဖြူဖွေးသော ကျောက်စရစ်လုံးငယ်ပေါများစွာရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျောက်ဖြူမြို့ဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျောက်ဖြူမြို့သည်ကား အလွန်သာယာလှပခြင်းတို့နှင့် ပြည်စုံပေသည်။ မြင့်သောအရပ်မှကြည့်လျှင် ပင်လယ်ရေ ပတ်လည်ဝိုင်းလျက်ရှိနေပေသည်။ ကံ့ကော်တောဘုရားဘက်သို့သွားရန် လမ်းတမျက်နှာသာလျှင် ကုန်းလမ်းဟူ၍ရှိပေသည်။ (ယခု ကျောက်ဖြူ ရမ်းဗြဲလမ်းမကြီးဖြစ်သည်) သို့သော် ပင်လယ်ရေ ပတ်လည် ၀ိုင်းသည်ကဲ့သို့ရှိနေသော်လည်း မြို့တွင်းရှိ သောက်သုံးရန် ရေများမှာကား ရေချိုတွင်းများသာဖြစ်ပေသည်။
စားသောက်ဖွယ်ရာ ဆန်ရေစပါးများမှာ လည်း မရှားမပေါရှိပေသည်။ အထူးသဖြင့် ပင်လယ်ငါးများပေါလွန်း၍ အခြားမြို့ရွာများမှာကဲ့သို့ ချိန်တွယ်ရောင်းချရန်မလိုပဲ ပုံတိုက်ကြည့်၍၎င်း၊ ကောင်ရေ အလိုက်ရေတွက်၍၎င်း ရောင်းချလေ့ရှိကြပါသည်။ ရာသီဥတုမှာလည်း မပူလွန်း မအေးလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ညီမျှမှုရှိပေသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ဖြစ်၍ သင်္ဘောရေယာဉ်များ အချိန်မရွေး ၀င်ရောက် ဆိုက်ကပ်သွားနိုင်သည်။ ရန်သတ္တရုနည်းပါးမှုတို့ကြောင့် အရာခပ်သိမ်း အန္တရာယ်အပေါင်း ကင်းငြိမ်းခြင်းရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရောက်ဘူးသူတိုင်းသည် စိတ်အေးချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုရှိကြပေသည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်ပင် ရှေးလူကြီးများက ဤမြို့အား ထူးဆန်းသောနတ်ကျွန်းသာဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပေသည်။ ကျောက်ဖြူမြို့၏ အကျယ်အ၀န်းမှာ အချား (၂) မိုင်၊ အနံ (၁) မိုင်ခွဲခန့် ရှိပါသည်။ မြို့၏ မြေမျက်နှာပြင်မှာ တောင်ကုန်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများဟူ၍ လုံးဝမရှိပဲ စည်မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ ညီညာပြန့်ပြူးလျက်ရှိပေသည်။
ကျောက်ဖြူသမိုင်းအား http://kyaukphyunews.blogspot.com/2008/12/welcome-from-kyauk-phyu.html မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
နအဖ သန်းရွှေ့နှင့် လက်ပါးစေများအတွက် ထို့ အပြင် လူပ...
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား လယ်သမားတို့၏ အခွင့်အရေးချို...
ခမရ ၄၃၅ နဲ့ ၄၃၆ က တပ်ရင်းမိသားစုနဲ့ ကျောင်းသားကျော...
မဲမပေးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ အမျိုးသာ...
စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ဇနီးဒေါ်နီနီခင်အား အနုကြ...
နှစ် ၆၀ ပျောက်ဆုံးမှုကို အဖြေရှာခြင်း(ဦးဝင်းတင်နှင...
(သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားများ သဘောထားထုတ်ပြန...
မုန်တိုင်းပြီးစ ကျောက်ဖြူမြို့ ရဲ့စိတ်မကောင်းစရာြ...
နအဖရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ မှု ရေးမြို့တွ...
စစ်အာဏာရှင်နအဖ ရဲ့ ကောက်ကျစ်နေတဲ့သဘောထားအမှန်နှင့်...
စစ်အာဏာရှင်နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မွန်ပြည်သစ် ပါ...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင် ကျွန်ချောင်းနှင့် ...
မြန်မာပြည်က လယ်သမားတွေကတော့သဖန်းသီး ကြည့်ပြီး မိုး...
ပေါင်ပေါ်တွင် လက်တော့ပ်ကို အချိန်ကြာကြာ တင်ပြီးသုံး...
ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေငြာစာတမ်း
ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်၏ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သပိတ...
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဂီရိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်...